သငျ့ရဲ့ IQ ကို စမျးသပျနိုငျမယျ့ မေးခှနျး ၃ ခု
HomeKnowledgeသငျ့ရဲ့ IQ ကို စမျးသပျနိုငျမယျ့ မေးခှနျး ၃ ခု
2016 ခုနှဈမှာ စိတျပညာရှငျတှကေ လူဦးရသေိပျသညျးခွငျးက လူတဈယောကျစီ အပျေါမှာ ဘယျလို အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိလဲဆိုတာ အဖွရှောခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီအခါ ဉာဏျရညျမွငျ့တဲ့သူတှကေ စရိုကျလက်ခဏာခငျြး သိသိသာသာ တူနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
၁။ လူဦးရထေူထပျတဲ့ မွို့ကွီးမှာ နနေိုငျလား..
1. မနနေိုငျပါဘူး။ လူဦးရမြေားတာ စိတျရှုပျတယျ။
2. ကိစ်စမရှိပါဘူး။ အိမျမှာနသေလိုပါပဲ။
၂။ အမွဲတမျးပေါငျးနတေဲ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အဆကျအသှယျ ပွတျသှားရငျ အထီးကနျြ ဝမျးနညျးတတျလား၊
2. ဘာမှ မဖွဈဘူး။
၃။ အောကျက ဝိုငျးထားတဲ့အဖွကေ မှနျတယျလို့ ထငျလား။
မေးခှနျးတိုငျးမှာ အဖွနေံပါတျ 1 ကိုရှေးရငျ သငျဟာ ပြျောရှငျမှုအညှနျးကိနျးမွငျ့သူပါ။
မေးခှနျးတိုငျးမှာ အဖွနေံပါတျ2ကိုရှေးရငျ သငျဟာ IQ အလှနျမွငျ့သူပါ။
ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတှကေ ဒီမေးခှနျးတှကေို အလှနျကြှမျးကငျြစှာ ဖွဆေိုနိုငျပါတယျ။ သူတို့ဟာ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အလငျြအမွနျ လိုကျလြောညီထှစှော နတေတျပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတှကေ စိတျရှုပျစရာတှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှဆေီက အကူအညီတှကေိုလညျး မယူတတျပါဘူး။
ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတှကေ ဘယျသူ့အကူအညီကိုမှ မယူဘဲ တဈယောကျတညျးဖွဈအောငျ ရပျတညျတတျကွပါတယျ။ ပွီးတော့ အရာရာကို မတူတဲ့ ရှုထောငျ့ကနေ ရှုမွငျတတျဖို့ကလညျး သိပျအရေးကွီးပါတယျ။ ခဲတံတှကေို မတူတဲ့ရှုထောငျ့က ကွညျ့ရငျ အလယျက ခဲတံက အရှညျဆုံးဖွဈတယျ ဆိုတာ တှလေ့ာရမှာပါ။
အဖွနေံပါတျ 1 နဲ့2ကို ရောပွီး ရှေးရငျ သငျဟာ ပြျောပြျောနေ တတျပွီး ဉာဏျကောငျးသူပါပဲ။
သင့်ရဲ့ IQ ကို စမ်းသပ်နိုင်မယ့် မေးခွန်း ၃ ခု
2016 ခုနှစ်မှာ စိတ်ပညာရှင်တွေက လူဦးရေသိပ်သည်းခြင်းက လူတစ်ယောက်စီ အပေါ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလဲဆိုတာ အဖြေရှာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူတွေက စရိုက်လက္ခဏာချင်း သိသိသာသာ တူနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၁။ လူဦးရေထူထပ်တဲ့ မြို့ကြီးမှာ နေနိုင်လား။
1. မနေနိုင်ပါဘူး။ လူဦးရေများတာ စိတ်ရှုပ်တယ်။
2. ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အိမ်မှာနေသလိုပါပဲ။
၂။ အမြဲတမ်းပေါင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားရင် အထီးကျန် ဝမ်းနည်းတတ်လား၊
2. ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
၃။ အောက်က ဝိုင်းထားတဲ့အဖြေက မှန်တယ်လို့ ထင်လား။
မေးခွန်းတိုင်းမှာ အဖြေနံပါတ် 1 ကိုရွေးရင် သင်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုအညွှန်းကိန်းမြင့်သူပါ။
မေးခွန်းတိုင်းမှာ အဖြေနံပါတ်2ကိုရွေးရင် သင်ဟာ IQ အလွန်မြင့်သူပါ။
ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေက ဒီမေးခွန်းတွေကို အလွန်ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အလျင်အမြန် လိုက်လျောညီထွေစွာ နေတတ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေက စိတ်ရှုပ်စရာတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေဆီက အကူအညီတွေကိုလည်း မယူတတ်ပါဘူး။
ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေက ဘယ်သူ့အကူအညီကိုမှ မယူဘဲ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်အောင် ရပ်တည်တတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အရာရာကို မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ရှုမြင်တတ်ဖို့ကလည်း သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ခဲတံတွေကို မတူတဲ့ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် အလယ်က ခဲတံက အရှည်ဆုံးဖြစ်တယ် ဆိုတာ တွေ့လာရမှာပါ။
အဖြေနံပါတ် 1 နဲ့2ကို ရောပြီး ရွေးရင် သင်ဟာ ပျော်ပျော်နေ တတ်ပြီး ဉာဏ်ကောင်းသူပါပဲ။